कम्युनिष्टको खोल ओढेर फाइदा लुट्न पाइदैन - नेता कटुवाल » Purbihotline
कमल बहादुर कटुवाल ( मिलन ) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) वराहक्षेत्रका अध्यक्ष हुन । २८ बर्ष देखि राजनीति क्षेत्रमा क्रियाशिल नेता कटुवाल तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले गरेको जनयुद्धका योद्धा पनि हुन् । उनले पार्टीमा सैन्य बिभाग लगायत विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रिय सल्लाहकार समिती सदस्य सम्मको जिम्मेवार पाएका हुन् । उनले २०७४ असार १४ मा भएको स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मेयर पदमा चुनाव समेत लडेका थिए । आउनुहोस उनै नेता कटुवाल सँग समृद्ध वराहक्षेत्र साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक अच्युत भट्टराईले गरेको कुराकानीको सार ।
१. अहिले निकै ब्यस्त देखिनु हुन्छ नि ?
– अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा ) वराहक्षेत्र नगर कमिटीको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए पछि स्वभाबिक रुपमा ब्यस्तता बढेको छ । वराहक्षेत्र भौगोलिक रूपमा पनि ठूलो छ । विभिन्न संघ संस्था लगायत पार्टी संगठनको काम परि रहन्छ यस कारणले ब्यस्त भएको हुँ ।
२. नगरमा तपाईं अध्यक्ष भएको पार्टीकै सरकार छ , यहाँका बिकास निर्माण लगायतका महत्त्वपूर्ण काममा तपाईंको भुमिका कस्तो छ ?
– पहिले केन्द्रमा पार्टी एकताको काम सकिएको भए पनि तल सम्म आइपुगेको थिएन । भर्खरै एकताको काम सकिएको छ त्यसो हुँदा अब मात्रै पार्टीले खेल्ने भुमिका शुरु हुन्छ । पहिले केही जनप्रतिनिधीहरुले पार्टी र मोर्चालाइ बिर्सिएर सबै आफू हुँ भन्ने हिसाबले जसरी काम गरेका थिए अबका दिनमा पार्टीले त्यसरी अगाडी बढ्न दिदैन ।
३. स्थानीय सरकार गठन भएको पनि दुई बर्ष बढी भैसकेको छ , बिकास निर्माणका कामहरु खासै भएनन् भन्ने गुनासाहरु निकै आउछन् , के साच्चै कामहरु नभएकै हुन त ?
– मेरो आज सम्मको अनुभवमा सरकार जहिल्यै पनि आलोचितनै रहने गर्छ । म बिकास हुँदै नभएको भन्दिन थुप्रै कामहरु भएका छन् । तर जनताले अपेक्षा गरे अनुसार भने भएको छैन । दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नु पर्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ केही कमजोरी भएको हो कि भन्ने लाग्छ ।
४. वराहक्षेत्र कृषि योग्य नगर हो , सरकारका कृषि कार्यक्रमहरु पनि निकै छन् , तर यहाँका मानिस खासै कृषि ब्यबसाय तर्फ लागेको पाइदैन किन होला ?
– यसमा चाहिँ सरकारले जनतालाइ बुझाउन नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ कसरी ब्यबसायिक बन्ने , के सम्भावनाहरु छन् , कुन बस्तु उत्पादन गर्ने , के को बजार कस्तो छ भन्ने कुरा बुझाउने खाल्का कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेको छैन । जनचेतना अभिबृद्धी भन्दै समोस र चिया खाने टाइम पास गर्ने खाल्का कार्यक्रम बढी हुन्छन् । यस्ता उपलब्धि बिहिन कार्यक्रमले बिकास हुदैन । अब यी कुराहरुमा पनि पार्टीले खबरदारी गर्ने छ । समय अनुसार नयाँ नयाँ कुराहरुको खोज गरिनु पर्छ र तिनिहरुलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ ।
५. नयाँ भन्नाले कस्ता किसिमका ब्यबसाय केही बताइदिनु न ?
– जस्तै मैले १ – २ बर्ष देखि एउटा ब्यबसायको अनुभव लिदैछु । यो टर्की ब्यबसाय अलिक फरक र आम्दानी हुने खाल्को ब्यबसाय रहेछ । यसको मासु सुगरको बिरामी लगायत अन्य प्रकारका बिरामीले पनि खान मिल्ने रहेछ । हामीले यस्ता किसिमका अन्य ब्यबसायको पनि पहिचान गरि ब्यबसायिक बन्न सक्नु पर्छ ।
६. शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
सामुदायिक बिद्यालयमा जुन किसिमको लगानी छ त्यस अनुसार फल आउदैन , सुधार गर्नु पर्ने निकै कुराहरु देखिन्छ । यदि निजि बिद्यालयहरु हुँदैन थिए भने यो अवस्थामा नेपालको शिक्षा डामाडोल नै हुन्थियो ।
७. वराहक्षेत्रमा पर्यटनको क्षेत्रमा कस्तो अवस्था छ ?
हामीले वराहक्षेत्र मन्दिर लाई मात्रै देख्यौ , वराहक्षेत्र मन्दिर चतरा धाम छदैछ , यति भए पर्यटक आइहाल्छ्न नि भन्ने बुझ्यौ कि जस्तो लाग्छ । पर्यटक मन्दिरमा मात्रै आउदैनन ।
हामीले हाम्रा अन्य प्राकृतिक सम्पदाहरुको प्रयोग गरि ७७ जिल्लाका मानिसहरु आउन सक्ने बाताबरण बनाउनु पर्छ त्यसका लागि प्रशस्त आधारहरु छन् । हामी संग पहाड पनि छ , नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदि कोशी नदि पनि छ , फाटिलो तराई पनि छ । बन जङ्गल पनि प्रशस्तै छ ।
८. वराहक्षेत्रमा कोशी बाढी पीडित तथा सुकुम्बासी समस्या निकै पुरानो समस्या हो यसको समाधान कहिले होला ?
– स्थानीय सरकारले यसको डाटा संकलन गरिरहेको बुझेको छु । पक्कै पनि केहि काम अघि बढेको छ । अब पार्टी भर्खरै एकीकरण भएको छ यसका बारेमा पार्टीका तर्फ बाट पनि हामी जोड्तोड्का साथ लाग्ने छौ ।
९. बेरोजगारी समस्या निकै छ यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय छैन ?
-नगरपालिकामा जागीर खुल्यो त्यसलाइ मात्रै जागिर भन्ने चलन छ । तर त्यो होइन जसरी हुन्छ मान्छेले आय आर्जन गर्नु पर्यो , त्यसका लागि सरकारले पनि जनतालाई उत्पादनशिल काममा लगाउन सक्नु पर्यो । वराहक्षेत्र लाई हेर्ने हो भने कृषि उत्पादनका लागि प्रदेश १ कै एउटा राम्रो ठाउँको रुपमा लिन सकिन्छ ।
१०. तपाईंलाई खरो बिरोधमा उत्तिर्ने नेता भनेर चिन्छ्न किन होला ?
होइन म कसैको चाकडी गर्दिन गल्ती गर्छ भने भन्नलाई बाकी राख्दिन । पार्टीको सिष्टम नमान्ने , ब्यक्ती हाबी हुन खोज्ने , आफ्नालाइ मात्रै च्याप्ने , आफू मात्रै कसरी ठाँउमा रहिरहने यस्ता किसिमका काम हुन्छन् भने कसरी चुप लागेर बस्न मिल्छ ।
११ . नगर सचिवालयको बैठकहरु त्यति बसेको पाइदैन अहिले त पार्टीको काम अलिक सुस्त जस्तो देखिएको छ केही विवाद छ कि ?
हाम्रोमा अरुको तुलनामा कामै नभएको म भन्दिन एक चरणको काम सफल गरिसकेका छौ हामीले , वडा सम्म एकताको काम सकेका छौ यसलाई उपलब्धि मान्नु पर्छ । केही असन्तुष्ट पक्ष पनि छन् , जुन गुट उपगुट बनाउन लागेका छन् तर हामी ती गुट लाई तोडफोड गरेर अघि बढ्ने छौ ।
१२. पार्टी कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तक लाई के सुझाव छ ?
– केही साथीहरू पार्टीमा जिम्मेवारी नपाएको भन्दै अत्तिनु भएको छ । अहिले अत्तिहाल्नु पर्दैन हामिले अरु निकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका काम बाडफाड गर्ने बाकी छ । अर्को कुरा कम्युनिष्ट पार्टीको खोल ओढेर फाइदा लुट्ने किसिमले आउनु भएन , निष्पक्ष हिसाबले यो समाजका लागि काम गर्न सकियो भने यसको फाइदा हामीलाई नै हुने हो ।
१३. नगर सरकारलाई के भन्नू हुन्छ ?
– निश्पक्ष र पारदर्शी ढंगले काम अघि बढोस् । बेला बेलामा केही कुरा हरु बाहिर आउने गरेका छन् । जस्तो अहिले पनि ज्ञानेन्द्र शाहीका बारेमा जुन किसिमको कुराहरु चलिरहेका छन् त्यो एकदमै भाइरल भएको छ । यसले त बदनाम गर्छ , खास भएको के हो ? यस्ता कुरालाइ बेलैमा चिरेर जानू पर्छ ।
१४ वराहक्षेत्रबासिलाइ के भन्नू हुन्छ ?
– तपाईंहरु भ्रष्टाचार भयो भन्नू हुन्छ अनि चिया दोकानमा बसेर गफ गर्नु हुन्छ , यदि भएको हो भने सम्बन्धित वडाध्यक्षहरुलाइ रोक्नुहोस न , के के बोलेका थिए , कुन काम गलत गरे बुझ्नुस । नगरमा जानुस , खास कुरा के हो बुझ्नुस । प्रसासन छ , लेखा शाखा , प्राविधिक शाखा , योजना शाखा छ । प्रमाण सहित आउनुस हामीले गर्ने सहयोग गर्छौ । हामी जनताको पक्षमा छौ , हावाको भरमा चाहिँ बोल्नु भएन ।
← सुनसरीमा ओम बौद्धिक आध्यात्मिक समाज गठन
वालवालिका र समाजमा सम्बन्ध विच्छेदले पारेको प्रभाव →
September 29, 2019 पूर्वी हटलाइन 0
September 13, 2019 पूर्वी हटलाइन 0